जीवन सफल बनाउने १० महत्वपूर्ण सूत्र यस्ता छन्::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
जीवन सफल बनाउने १० महत्वपूर्ण सूत्र यस्ता छन्
सफलता हरेक मानिस चाहान्छन् । सफल र सार्थक कुन चाँही हो भन्नेकुरा संसारलाई हेर्ने आ–आफ्नो दृष्टिकोणमा भरपर्छ । तर मानिस जसरी हुन्छ सफल हुन चाहान्छन् । दैनिक जीवन व्यवहारका साधारण कुराहरुले नै मानिसलाई सफल र असफल बनाउँछ । हामीले सोच्दै नसोचको साधारण कुराहरुनै सफलताको कुल योग हो । त्यसैले सफल हुनका लागि निम्न १० कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस् ः
२. एउटा विश्व प्रसिद्ध भनाई छ, ‘हरेक सफल मानिस कुनै फरक काम गरेर सफल भएका हुँदैनन् । उनीहरु हरेक काम फरक ढंगले गर्छन् । त्यसैले कुनैकाममा तपाई हुनुहुन्छ भने अरुले नगरेको नयाँ तरिकाले गर्नेतिर सोच्न थाल्नुहोस् । सफलता तपाईको हात लाग्नेछ ।
४. हामी प्राय दिनभर काम गरेपछि बेलुकी कि त सुत्छौं कि मदिरापानमा डुब्न थाल्छौं । तर तपाईले दिनभरि गर्नु भएको कामको समिक्षा बेलुकी सुत्नुभन्दा अघि एकैछिन गम्भिर भएर गर्ने र भोलीका लागि केही नयाँ सोंच निकालेर अघि बढ्ने गर्नुभयो भने सफलता तपाई भन्दा धेरै टाढा नहुनसक्छ ।
५. आत्मबल मानिसको सबैभन्दा ठूलो सम्पति हो । आत्मबल कमजोर भएको मानिसले जीवनमा केहीपनि गर्न सक्दैन । आत्मबल नै यस्तो तागत हो जसले तपाईलाई उन्नतिको शिखरमा पु¥याइदिन सक्छ । त्यसैले आत्मबल कमजोर कहिल्यै नबनाउँनुहोस् ।
६. निरन्तर चिन्तन गनुृहोस् । हामी सबैको बानी चिन्तन गर्ने भन्दा चिन्ता गर्नेतिर बढि हुन्छ । भनिन्छ मानिसलाई चिन्ताले चितामा पु¥याउछ र चिन्तनले सफलताको शिखरमा पु¥याउँछ । चिन्तन बिनाको मानिस समाजमा फोस्रो व्यक्तिका रुपमा सिमित हुन्छ ।